Ciidamada ammaanka Soomaaliland oo dad ku xir xiray magaalada Burco iyo howlgalo weli socda – Radio Daljir
Oktoobar 31, 2013 4:07 b 0
Burco, October 31, 2013 – Ciidamada amaanka ee Soomaaliland ayaa dad badan ku qaqabtay magaalada Burco ee xaruunta gobolka Togdheer, dadka la hayo ayaa dhamaantood waxaa lagu eedeyey falal lid ku ah amaanka guud.
Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland ee gobolka Togdheer Axmed Cabdiraxmaan Xasan waxaa uu sheegay in dadka la qabtay baaris dheer lagu samayn doono, isla markaasna la hubinayo in ay faraha kula jireen dembiyada lagu eedeyey.
?Howlgalo ayaa socdo maalmahan wayna sii socon doonaan, waxaa jira tuhumo dhowr ah dad ayaan qabannay balse baaris kadib ayaa natiijada eedayntooda shaacin doona.? Ayuu yiri Taliye Axmed Xasan.
Taliyaha booliska ee gobolka Togdheer waxaa uusan sheegin tuhumada jira nooca ay yihiin iyo dembiyada dadka lagu haysto, in kastoo uu sheegay in howlgalladu ay yihiin kuwii caadiga ahaa ee amaanka lagu sugi jiray.
Baargaal oo laga dhisayo dugsi ay agoontu wax ku baartaan oo qurba-joogtu maal-gelisay (Dhegeyso)